Kulan looga hadlaayay arimaha amaanka oo ka dhacay degmada Buuhoodle • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Kulan looga hadlaayay arimaha amaanka oo ka dhacay degmada Buuhoodle
Kulan looga hadlaayay arimaha amaanka ayaa maanta ka dhacay degmada Buuhoodle ee xarunta gobolka Ceyn,waxaana ka qaybgalay Saraakiisha Booliska iyo maamulka gobolka iyo weliba masuuliyin ka socotay xukuumada Puntland.
Wasiirka Kallumaysiga iyo Kheyraadka Badda Puntland Maxamed Faarax Aadan oo kulanka ka dib la hadlay Horseed Media ayaa sheegay in waxyaabaha ay sida aadka uga wada hadleen ay ahayd sidii loo xoojin lahaa amniga gobolkaasi.
Wuxuu sheegay in kulankaasi ay uga doodeen arimo fara badan balse ay ugu weynayd arimaha amaanka isagoo sheegay in la isku afgartay in looga hortago doorashooyinka maamulka Somaliland in lagu qabto gobolkaasi oo la keeno kaararka codbixinta.
Wasiirka ayaa xusay in sidoo kale lagu heshiiyey in heegan la geliyo Ciidanka Booliska iyo kuwa daraawishta Puntland ee gobolkaasi ilaa 26-ka Bishaan June xilligaasi oo ay dhici doonto doorashooyinka maamulka Somaliland.
Kulanka ayaa waxaa maanta sidoo kale goobjoog ka ahaa Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Puntland Mudane Xuseen Yaasin iyo labo Xildhibaan oo kasoo jeeda gobolka Ceyn.